आफूभन्दा १३० स्थान माथि रहेको टोली अस्ट्रेलियासंग नेपाल ३ -० रे ले पराजित, १० खेलाडी हुँदा पनि राम्रो खेली नेपाली – Sapana Sanjal
June 12, 2021 167
Sapana Sanjal : नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली विश्वकप तथा एसियन कप छनोटको अन्तिम खेलमा अष्ट्रेलियासँग पराजित भएको छ । दोस्रो हाफ १० खेलाडीमा सिमित भएको नेपालले अष्ट्रेलियासँग ३-० ले पराजित भएको हो । कुवेतको जाबेर अल-अहमद रंगशालामा छैठौं मिनेटमा नेपालले पहिलो गोल खाएको थियो । अस्ट्रेलियाका म्याथ्यु लेकीले गोल गर्दै नेपालविरुद्ध अग्रता दिलाएका थिए ।
पहिलो हाफको खेलसकिन ७ मिनेट बाँकी रहँदा फ्रान काराचिचले पुन: गोल गर्दै अस्ट्रेलियाको अग्रता दोब्बर पारे । विपक्षी खेलाडीलाई गोल गर्ने स्पष्ट मौकामा फाउल गरेसँगै अनुभवी डिफेन्डर रोहित चन्द पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रातो कार्डको सामना गर्दै मैदानबाट बाहिरिए ।
खेलको ४४ औं मिनेटमा रोहित चन्दले रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाड्न बाध्य भए । मार्टिन बोएललाई पेनाल्टी क्षेत्र बाहिर वन भर्सेस वनको स्थितिमा अघि बढेको अवस्थामा फल गरेको भन्दै रेफ्रीले रातो कार्ड देखाएका थिए ।
आफूभन्दा १३० स्थान माथि रहेको टोली अस्ट्रेलियाविरुद्ध नेपालले १० जनामा सीमित भएर पनि पछिल्लो ४५ मिनेट राम्रो डिफेन्सिभ खेल प्रस्तुत गर्‍यो । अस्ट्रेलियाले गरेको लगातार प्रहारमा नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले धेरै गोल बचाएका थिए । नेपालका लागि पहिलो पटक टोलीमा समावेश भएका आयुष घलान, सुरज जेउ ठकुरी र कमल थापाले डेब्यु गरे ।
यस हारसँगै नेपालको एसियन कप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना सकिएको छ । अब तेस्रो चरण पुग्न नेपालले प्लेअफ चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै समूहका पुछारका टोली र चौथो स्थानमा रहने कमजोर चार टोलीले प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । अष्ट्रेलिया भने ७ खेलमा २१ अंकसहित विश्वकप छनोटको तेस्रो चरण तथा एसियन कपका लागि छनोट भएको छ । नेपाल भने ८ खेलमा ६ अंकसहित चौथो स्थानमा रहयो ।
Posted in खेलकुद समचार
Prevजेष्ठ २९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next६ महिना अघि बिहे अहिले मस्र्याङ्दी नदीमा बगाईदिए
आज मंगलबार ह्वात्तै घट्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
१८ दिन देखि अस्पतालमा रहेका पूर्व राजारानी ज्ञानेन्द्र र कोमलको स्वास्थ्यको बारेमा अस्पतालले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ती
अवैधबाटो हुदै अमेरिका छिर्न लाग्दा कोलम्बियाको समुद्रमा डुंगा दुर्घटना हुदा ७ नेपाली हराए (नामावलीसहित)
संक्रमणबाट जनरल फिजिसियन डा. पशुपति रजौरियाको निधनले मुलुकलाई नै ठूलो क्षती
गाउँपालिकामा अनुदान खान यस्तो समेत हुँदोरहेछ ! किसान देबीप्रसादले दिउँसै पारे रात (1418)
पारस शाहले भने, ‘हेलमेट लगाउनु नलगाउनु मेरो मनको इच्छा हो’ (1413)
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई? (1338)
२ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं !!! (1107)
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला।। (1028)
रामराम के भयो यी साना बाबुलाई ,हेर्दाहेर्दै यस्तो भयो ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (998)
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (970)
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित (907)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (903)
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ ! (851)